बुधबारबाट काठमाण्डु उपत्यकामा के–के गर्न पाइन्छ ? (सूचीसहित) « Kathmandu Pati
बुधबारबाट काठमाण्डु उपत्यकामा के–के गर्न पाइन्छ ? (सूचीसहित)
काठमाण्डु – काठमाण्डु उपत्यकाका तीन जिल्लामा बुधबार रातिदेखि लागू हुने गरी अत्यावश्यकबाहेकका सबै गतिविधिमा निषेध गरिएको छ ।
तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका सुरक्षा प्रमुखको बैठकले अत्यावश्यकबाहेकका गतिविधि निषेध गर्ने गरी आदेश जारी गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डुका अनुसार बुधबारदेखि औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरीदको कामबाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट निस्किन नपाउने गरी १७ बुँदे निर्णय गरिएको छ ।
अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तुबाहेक अन्य सबै प्रकारका व्यापारव्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत निषेध गरिएको छ । अत्यावश्यक सामग्रीलगायत मालबाहक ढुवानीका सवारी साधन, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधनबाहेक काठमाण्डु उपत्यकाभित्र सवारी प्रवेशमा समेत निषेध गरिएको छ ।